QGIS, PostGIS, LADM - na Usoro Nhazi Ala nke IGAC - Geofumadas mepụtara
Julaị, 2017 cadastre, Apụta, Geospatial - GIS, qgis
Na ntụgharị nke atumatu dị iche iche, ebumnuche na nsogbu ndị Colombia na-enwe iji jigide onye isi na cone ndịda na ihe gbasara ọnọdụ ụwa, n'etiti July 27 na August 4, Center for Research and Development of Geographic Information - CIAF nke Geolọ Ọrụ Geographical Agustín Codazzi ga-etolite usoro: Itinye ụkpụrụ ISO 19152 (Land Administration Domain Model) na iji asụsụ INTERLIS eme ihe gbasara Spatial Data Infrastructures.
Ihe ziri ezi bụ ihe doro anya, ebe ọ bụ na Nchịkwa Ala bụ ihe esemokwu dị mkpa n'ọtụtụ mba, nke ọhụụ dị iche iche, mmekọrịta akụ na ụba na gburugburu ebe obibi kpatara. Ọganihu nkà na ụzụ ebe ọ bụ na afọ 90 gbatịworo ohere dị iche iche nke ohere iji nye ọrụ ndị ọhụrụ ma dị mma na data gbasara ohere na ikike ikike, na-eji ohere nke njikọta arụmọrụ, data databasesị, mmemme kọmputa na akụrụngwa. Nsogbu a maka nrụpụta nkà na ụzụ a na ọchịchọ nke ụlọ ọrụ ọha na eze na nke onwe, na-adabere site na iji ụkpụrụ; N'ime usoro a, e kere 2014 Catastro ihe omume na 1995 afọ, na akụkụ nke ihe onwunwe ya na ISO 19152 Standard na afọ 2012.
Ọtụtụ mba n'ụwa nile na-achọ ugbu a imejuputa LADM na Cadastre ha, Ndenye Ala na Usoro Data Akụrụngwa. INTERLIS bụ asụsụ nke gosipụtara ịdị na-arụ ọrụ nke ọma n'ịmepụta ngwá ọrụ na usoro iji kwado mmekọrịta na ịnyefe ihe ọmụma nke ụlọ.
Colombia bụ otu n'ime mba ndị a, na ọnọdụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe, mgbanwe iwu na nke ụlọ ọrụ, na-eme atụmatụ iji ohere LADM nwere ike dị ka ihe na-agagharị agagharị maka imeziwanye nlekọta mpaghara. E mepụtara profaịlụ profaịlụ, profaịlụ profaịlụ ọkachamara na ngwaọrụ eji eji asụsụ INTERLIS eme ihe.
A na-ekwu di mkpa maka Agustín Codazzi Institute integrates n'ime ya agụmakwụkwọ enye a N'ezie na nwere ike isi na ndị ọkachamara ụwa sayensị, abuana ke iche nkebi nke okirikiri nke territorial management na integrated obibia.
Na ọgwụgwụ ya na-atụ anya na sonyere nwere oru na cognitive ikike na sonyere, gbasara ohere Data infrastructures na mastery nke ọkọlọtọ ala ochichi LADM na ojiji nke INTERLIS asụsụ ike ngwá ọrụ na usoro ikwado ha doo na mmejuputa iwu.
O doro anya na usoro ahụ abụghị naanị ihe dị mkpa, mana ọ dịkwa mma n'ihi nchikota ọ nwere n'etiti usoro iwu na omume. Oge ahụ bụ oge 32, n'ime ụbọchị anọ kesara izu abụọ (Tọzdee na Fraịde) ma hazie ya na atọ:
Generalities, nke gụnyere echiche ndị bụ isi gbasara nlekọta na-elekwasị anya na ọnọdụ ụwa na ihe ịma aka nke 2034 Cadastre, ihe gbasara data gbasara ọdịdị ala, na ụkpụrụ data ala na ọdụ data.
Mkpokọta nke abụọ gụnyere ntọala usoro iwu nke LADM, profaịlụ Colombia maka ịnabata ụkpụrụ ISO 19152 ma jiri okwu metụtara Cadastre, Registry Property and Territorial Plan. Nakwa na ngọngọ a, ha na-ewebata ụkpụrụ nke asụsụ nlele UML.
Na ngọngọ nke atọ, iwu nke LADM na-arụ ọrụ na ịgbaso usoro ọrụ a na-achọta mgbe ị na-eji INTERLIS, site na semantic ya site na koodu ahụ, iji ngwaọrụ ndị dị ka UML Editor na ili2pg, nke a na-arụpụta usoro data Ozi gbasara ala PostgreSQL / PostGIS, ọgbọ nke data na ihe nlereanya na-eji QGIS ngwa mgbakwunye, mbupụ, nkwado na nchịkọta data ruo mgbe ọ na-ahụ ya site na onye na-ekiri ihe gbasara mbara igwe.
Na nkenke, ọ bụ mgbalị na-adọrọ mmasị na oge a nwere nkwado nke Economic and Development Cooperation (SECO) nke Switzerland Embassy.
Previous Post«Previous Webinar: 5 kacha mma i nwere ike ime na CAD software
Next Post Enwere m data LiDAR - ugbu a gịnị?Next »
6 Na-aza "QGIS, PostGIS, LADM - na Usoro Nchịkwa Ala nke IGAC mepụtara"
eche kwuru, sị:
A ka m geofumadas ma eche m ihe omuma banyere uzo ochichi ala a.
N'okpuru Victor M. Perez kwuru, sị:
August, 2017 na
Ụlọ ọrụ ahụ maka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ maka Ọdịmma Ego (Colombia), nke Secretary nke State maka Economic Affairs (SECO) nke Gọọmenti Switzerland, tinyere nke Canton of the Confederation, na-emepụta nkwụnye ya, ebe ọ bụ na Switzerland jiri International dị ka ụkpụrụ nke mgbanwe na nhazi. Nkwụnye ahụ ga-emeghe, free na n'efu ma enwere ike ibudata ya maka QGIS.
Ọ e mere maka edezi data on Land Administration na a kpọmkwem na gburugburu ebe obibi: ewuli ke a data nlereanya (ọmụmụ aka, ha mmekọrịta na constraints amanye) na ihe banyere Colombia, LADM-COL, na -ewu edezi gburugburu ebe obibi, ekemende inye interface na mmemmem edezi dabeere na mkpa nke ndị nlereanya. Ọ na-arụ na gburugburu ebe obibi nkwado na data mgbanwe.
Samuel Mesa kwuru, sị:
Ndewo, m ga-achọ ịmatakwu banyere ngwa mgbakwunye ahụ, enwere ike ịnweta nke a n'enweghị nsogbu, ebe ị nwere ike ibudata ma nwalee ngwa mgbakwunye ahụ
IGAC na-ezube ime ka ọ bụrụ usoro n'ime usoro ọzụzụ ya. Dika agwara m, na onwa ole ma ole enwere ike idi ya kpam kpam.
M na-atụ aro itinye anya na ihe ICDE bipụtara
Devid Fernando urrelo kwuru, sị:
N'otu ụzọ ahụ m nwere mmasị ma n'ụzọ dị mma, site na Bolivia. dfernando.urrelo@gmail.com
Carla kwuru, sị:
Ọfọn, ụfọdụ ụdị akwụkwọ banyere usoro ahụ, M si Argentina na-enwe mmasị na isiokwu a